तपाईंको बच्चा घमण्डी वा जिद्दी छ ? यसरी सुधार्नुहोस « जालपा न्युज Jalapa News
तपाईंको बच्चा घमण्डी वा जिद्दी छ ? यसरी सुधार्नुहोस
राम्रो व्यवहार देखाउनुस
बच्चाको साथी बन्नुस
च्चालाई दिनदिनै केही न केही नयाँ कुरा सिकाउनुस् । तपाईं असाध्यै व्यस्त हुनुहुन्छ भने पनि सप्ताहान्तमा बच्चाका लागि समय अवश्य निकाल्नुस् । बच्चालाई एक्लोपनको अनुभव हुन नदिनुस् । तपाईंलाई उसलाई ध्यान दिनुभयो भने उसले तपाईंसँग नजिकिन मन पराउँछ ।
बच्चालाई सरप्राइज दिनुस